SUSE Studio (Chikamu II): Ungasarudza sei Software yedu | Kubva kuLinux
SUSE Studio (Chikamu II): Ungasarudza sei Software yedu
Atr0m | | Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Ichi chikamu chechipiri nezve chishandiso Sravana Sameeralu Serial XNUMXth SUSE Studio, kuverenga chikamu chekutanga tinya pano. Muchikamu chekutanga ndakatsanangura zvishoma chimiro che Sravana Sameeralu Serial XNUMXth SUSE Studio, muzvikamu zvinotevera ini ndichaedza kutsanangura chishandiso zvakadzama, uye iko simba rechishandiso ichi charere chaizvo, chikamu chiri Software uye izvo zve Setup. Muchikamu chechipiri ichi ini ndichaenda kunonongedza muchikamu chiri Software.
1 Software chikamu muSuse Studio
1.1 Software zvinyorwa
1.2 Tsvaga software
Software chikamu muSuse Studio
Muchikamu chino tinogona kusarudza software iyo kugoverwa kwedu kutsva kuchave nekutadza. Mune iyo tebhu Software Kune zvikamu zvitatu zviri zvinotevera: Software zvinyorwa, Sarudzo software y Tsvaga software.
Muchikamu chino tinogona kusarudza iyo zvinyorwa uye mafaera RPM kubva kwatichazokwanisa kuwedzera software yatiri kuda kwekugovera kwedu. Pano tinogona kuona zvinhu zviviri zvakakosha: izvo zvinyorwa uye mafaera atakawedzera izvozvi uye mabhatani maviri atinogona kuwedzera zvimwe zvinyorwa kana mamwe mafaera RPM.
Kuwedzera repository tinya bhatani Wedzera repositories uye injini yekutsvaga ichaonekwa iko nekupinza zita repakeji kana zita repositi, ichatsvaga zita repake uye mapakeji arimo.
Izvo zvichatiratidza mhedzisiro pazasi nebhatani rekuwedzera iro repositori, zita repositi, mukana wekutarisa mapakeji ane izwi rakatsvakirwa uye neyakajairwa bhawa yeiyo repository:
Kuti ukwanise kuwedzera zvakachengetedzwa neruoko unofanirwa kubaya pane bhatani Pinza nyowani nyowani iri kumusoro kumusoro. Kubaya pane bhatani kunotitora kuenda kune rimwe hwindo uko kune maviri sarudzo dzekuwedzera dura, iine zita rechirongwa:
kana ne URL:
Kuwedzera faira RPM kune kwedu masosi iwe unofanirwa kubaya pane bhatani Isa RPMs. Pano pahwindo rine mabhatani maviri achaonekwa. Bhatani Isa RPMs hwindo rinotivhurira kubva kwatichafanira kusarudza iyo RPM iyo yatinoda kuisa kubva kuPC yedu:
Rimwe bhatani Wedzera kubva paWebhu (URL) inotitora kuenda kune rimwe hwindo kwatinofanira kuratidza iyo URL Yepakeji:
Kuti ubvise repository kana faira, kungoti patinovaisa mazita isu tinoisa mbeva pamusoro payo uye a "X" kukwanisa kuibvisa nekungobaya chete.
Muchikamu chino tine chinyorwa chemapakeji atakawedzera mukugovera kwedu. Kuti uwedzere pasuru, pazasi pezvavakanyorwa tine bhatani rinoti Kurumidza wedzera, tinya uye injini yekutsvaga ichaonekwa uko nekuisa zita repakeji uye nekudzvanya pane bhatani wedzera ichawedzera zvakananga pasuru kune iyo runyorwa.
Kana isu tikasaisa iro chairo pasuru zita, ichatitaurira kuti haapo.
Kuti udzime pasuru, ita zvakafanana nezviri muchikamu Software zvinyorwa.
Muchikamu chino tinogona kutsvaga mapakeji atinoda kugovera. Pane zvikamu zviviri, mune rimwe chete tinogona kushandisa injini yekutsvaga kuisa zita repakeji uye nekuisarudza muhwindo rinowoneka nekudzvanya bhatani wedzera:
Icho chikamu chinoumbwa nemifananidzo yakawanda uko software yakarongedzwa na zvikamu. Kana isu tikabaya pane icon, hwindo rinowoneka nemapakeji ese arimo chikamu uye wedzera ivo nekudzvanya pane bhatani wedzera:
Parizvino chikamu chechipiri nezve Sravana Sameeralu Serial XNUMXth SUSE Studio, muchikamu chinotevera ini ndichataura nezve iyo tab Configuration.
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth SUSE Studio
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » SUSE Studio (Chikamu II): Ungasarudza sei Software yedu
Pindura kuna fedo
Mudzidzisi akanaka. Izvi zvinoita kuti iwe ude kuedza SuSE / OpenSuSE.
BrigaDier Pepis akadaro
Mubvunzo mumwe, unogona here kupinda muSUSE Studio ine Google account? Ndanga ndiine account kwemazuva mashoma pasina dambudziko asi izvozvi, pandino pinda mukati, inondiudza "Error Invalid username or password".
Pindura BrigaDier Pepis
Nhasi handina matambudziko neakaundi account. Ndinopinda zvakanaka
Pindura kuna Atr0m
Mipiro kune Xfce chirongwa
F-Droid: Yemahara Software Repository yeApple